中文 ChiRussian Español
Organic fotereza Mukudhinda Line
Remubatanidzwa fotereza Mukudhinda Line
Disc fotereza Granulator
Michina Drum Dryer
Belt Conveyor System chinhu chinokosha muupenyu fetiraiza kugadzirwa yose mutsetse. We zvinopa vatengi pamwe vachida bhandi conveyor uye yakakwirira mafungiro-angled bhandi conveyor. The conveyor vachida richibatanidza chikuru fetiraiza midziyo pamwe chete, kuita nyore mbishi zvinhu & ndapedza zvigadzirwa chokufambisa. The zvinhu rokufambisa conveyors zvinoshandiswa deva uye kuderera chikumbira kubvumira fetiraiza kuti vaunganidza apo kutamira pakati mapuriro kana ukapisa murwi conveyor. Kuponesawo basa, nguva uye simba, pamwe mabhii pamatunhu kunyatsoshanda & nyore kushanda. Vachida conveyor zvinowanzodavirwa kushandiswa kwete chete remubatanidzwa & makemikari fetiraiza kugadzirwa, asi vemiti & inosimbisa pellets kugadzirwa mutsetse, riri chinjika maererano vatengi yakawanda. The acho ari asunungurwa kupinda Hopper yacho conveyor. Izvi yaunodya Hopper ane rabha-okupedzisa Mahwendefa kuderedza kubirwa. Kana kusakadzwa, mahwendefa aya anogona nyore kubviswa. The vachida bhandi conveyor inovakwa pamusoro wakatemerwa Stainless simbi. The furemu iripo zvikamu zviri akakiya pamwechete. The conveyer bhandi iri kupisa kutengeswa.
Previous: Mupfudze Packaging Machine
Belt Width (mm) Bhandi Length (m) / Power (KW) Belt Speed ​​(m / s) Kukwanisa (t / h)
Cherechedza: simba chaiyo achapiwa vakasarudza nokuda kwakakwana seti
1. Compact design, yakanakira zviyo, upfu kana mupfudze zvigadzirwa.
Belt conveyor rinoumbwa rollers uye namahwindo conveyor bhandi. Pane rollers maviri mumwe ari kutyaira conveyor kutenderera mumwe munhu kuti kuchinja injini kutungamirirwa conveyor. Head chinotenderera iri drived nokuda gwenya conveyor iri draged nechisimba kuti kukweshera iro yakawanikwa kubva mumusoro chinotenderera uye conveyor. Head chinotenderera iri kazhinji munguva zvaikosha pakuguma kuwedzera traction kuti uchimanikidza nani. Material zvokudya kubva dyisa magumo uye chikawira pamusoro kutenderera conveyor bhandi uye asunungurwa ne conveyor Delivery magumo.
Mupfudze Packaging Machine